T-Shirt Lehilahy, T-Shirt Vehivavy, Akanjo Fiakarana Ankizy Fohy Miakatra - Pinyang
Men S Akanjo
Men S Hoodie & akanjo ba
Tsy misy Cap
Akanjo S Men
Palitao S Men
Trousers Men S
Akanjo vehivavy S
Vehivavy S Hoodie & akanjo ba
Akanjo S vehivavy
Ankizy S Akanjo
Sarin'ny vondrona mpanjifa
Akanjo ho an'ny lehilahy
LOGO azo zahana vita amin'ny landihazo vita amin'ny lehilahy ...
T-Shirt tovovavy lava vita amin'ny landihazo T-Shirt PY-GTC001
T-Shirt zazalahy kely 12-16 taona lava PY-TC003
Akanjo 100% landihazo vita amin'ny landihazo PY-YR007
Retro Square Collar Sleeve Short Woen T-Shirt P ...
Fanontam-pirinty fanatanjahan-tena miendrika fanatanjahan-tena vehivavy T-Shirt ...
Gym Sports Sports T-Shirt lava lava PY-CT002
Logo manokana an'ny olona lava Hoodie PY ...
T-Shirt lehilahy fohy tanany 100% T-Shirt PY-ND004
24 ceht. 2015 г. 12:50:27 0 hevitra Admin Admin
Miaraka amin'ny toe-draharaha misy ny en ...
Tamin'ny 16 aprily, nahazo akanjo 3000 i Pinyang, izay natolotra soa aman-tsara ny faha-29. “Ny habetsahan'ity baiko ity dia tena kely ary mila loko fito. Maharitra 12 ora ny lokon'ny loko iray ary telo andro ny loko fito. Mila mameno var ...
Ny akanjo Pinyang dia mamorona manuf malefaka ...
Ny baiko ho an'ny akanjo roa na telo fotsiny dia azo ekena Noho ny fidiran'ny “pabrikan'ny rhinoceros” an'i Alibaba dia lasa lohahevitra mafana eo amin'ny sehatry ny indostria indray ny fanovana ny indostrian'ny fanamboarana akanjo. Raha ny marina, hatramin'ny lamaody akanjo marika iraisam-pirenena ...
Mandray ny filan'ny tanora amin'ny maha ...
6 Oktobra 2020, tamin'ny folo maraina. Raiso ny lamba ho fifantohan'ny fanavaozana ny vokatra, tsidiho ny fahalalana sy ny toetran'ny lamba. Ny tolakandro dia nandamina ny atiny mifandraika amin'izany ny sampan-draharaha misahana ny fitantanana ary niantso ny mpiasa mifandraika amin'izany amin'ny fanazavana teorika ...
Tamin'ny volana oktobra 2020, tapaka ny hevitra fa avelany ...
Amin'ny volana oktobra 2020, mba hitandremana tsara kokoa ny foto-kevitra sy ny «miompana amin'ny olona», dia hanome serivisy manara-penitra ny mpanjifanay izahay. Avelao ny mpanjifa hanana safidy bebe kokoa ary nanapa-kevitra ny hamela ny ekipany handray anjara amin'ny fianarana teknolojia vaovao. Hanomboka hianatra izy ireo amin'ny 6 Oktobra, ka ...
Mba hampiharana tsara kokoa ny fitantanana mahia, hanatsara ny fahaiza-miasa ary hanitatra ny hevitra miasa, ny 15 martsa 2020, ny mpiasa eo amin'ny sehatry ny famokarana dia nalamina mba hanao fiofanana manaraka maharitra herinandro. Ny atiny lehibe amin'ity fandinihana ity dia misy fizarana roa: ny fahaiza-miasa amin'ny ...
89 Qessen Road, valan-javaboary ampiasain'ny vahiny, Distrikan'i Xinjian, Tanànan'i Nanchang, faritanin'i Jiangxi, Sina